आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२७ पौष २०७८ मंगलबार, ११ जनवरी २०२२) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२७ पौष २०७८ मंगलबार, ११ जनवरी २०२२)
२६ पुष २०७८, सोमबार २३:५९
श्रीशाके १९४३ हेमन्त ऋतु राक्षसनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४२ वि.सं. २०७८ पौष २७ गते मंगलबार तद्अनुसार सन् २०२२ जनवरी ११ तारिख पौष शुक्लपक्ष नवमी तिथि अश्विनी नक्षत्र सिद्धि योग तैतिल करण आनन्दादिमा अमृत योग चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः५८ मा र सूर्यास्त साँझ १७ः२६ मा हुनेछ । पृथ्वीजयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस ।
मेष – आरोग्यता एवम् यश वर्चश्व वृद्धि हुनेछ । सानातिना काम र घरेलु समस्यामा नै आजको समय व्यतीत भए पनि त्यसबाट राम्रो लाभ हुनेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । मनोरञ्जनपूर्ण समय छ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्ला । आशा उत्साह थपिनेछ । आयमूलक काममा सफलता मिल्नेछ । सुख समृद्धि बढ्नेछ । पारिवारिक सुख बढ्नेछ ।
वृष – रसराग बढ्नेछ । धनको आवागमन भैरहने छ । व्यस्तता बढ्नेछ । मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यात्रामा सोचेजस्तो रमाइलो नहुन सक्छ । खानपानमा नियन्त्रण गर्नुहोला । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । समस्याको समाधान प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन – समय लाभदायक छ । टाढाको यात्रा सम्भावना छ तर अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । मनोरञ्जनपूर्ण समय रहे पनि कामकोे चापले गर्दा प्रेमी–प्रेमिकासँग र दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य चिसोपन देखिन सक्छ । धैर्य र विवेकले काम गर्नु बेस होला । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ ।
कर्कट – उच्चाधिकारीको सहयोग समर्थन प्राप्त हुनेछ । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला । नचिताएको स्थानबाट धन आगमनको सम्भावना छ । परिुख बढ्नेछ । हांसविलासमा रुचि बढ्ला । खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । कार्यगति बढ्ला ।
सिंह – ग्रहगोचर उन्नतिकारक रहला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । तर, पारिवारिक वातावरण प्रतिकुल रहला । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ । प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन् । उधारो लगानी लगाइएको धन उठ्ला । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । घरपरिवारसित सम्बन्धित शुभ समाचार मिल्नेछ ।
कन्या – कठोर मिहीनेतले कार्यमा सफलता मिल्नेछ । कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । चुनौतीका बाबजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ । जीवनसाथी, सन्तति वा विपरीतलिङ्गी साथीसँग सम्बन्ध आत्मीय बन्ने सम्भावना छ ।
। रोकिएको काम बन्नुंगै रोकिएको धन उठ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । जोखिममा नपर्नु हितकर हुनेछ ।
तुला – रसराग बढ्नेछ । यात्रा होला । सुख आनन्द बढ्ला । कार्यमा सफलता भैरहनेछ । । ठूलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्छ । आर्थिक लाभ प्राप्त होला । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त होला । सन्तानको साथ मिल्नेछ । भाग्यबर्द्धक काम बन्नेछ । सुख समृद्धि धन यश मान पद प्रतिष्ठा बढ्नेछ । तथापि अरुको भरमा नबसी आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु उचित होला ।
वृश्चिक – मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । सवारी साधन हाँक्दा अपनाएको सचेतका कारण चोटपटकबाट जोगिनुहुनेछ । बौद्धिक क्षेत्रको काममा लामो यात्राको सम्भावना छ ।
धनु – साहसिक काम बन्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला । कतै लामो दूरीको लाभदायी यात्रा गर्नुछ भने आज राम्रो हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ । शत्रुहरूको चलखेल बढे पनि तिनले तपाईंलाई हानी गर्न सक्ने छैनन् । लेखन प्रकाशन,कला, साहित्य,लेखन आदिसित सम्बन्धित कार्यमा सफल हुनुहुनेछ । पराक्रम वृद्धि होला । आयातनिर्यातसित सम्बन्धित काम बन्ला । सुख आनन्द मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्ला । पारिवारिक स्थितिमा सुधार हुनेछ ।
मकर – भाग्य वृद्धि होला । आरोग्यता बढ्ला । आर्थिक पक्ष सबल नै छ, यद्यपि समय बलियो छैन । गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा राम्ररी मोलतोल गर्नुहोला । शत्रुलाई जीत्ने क्षमता बढ्नेछ । सुखशान्ति मिल्नेछ । सभासमारोहमा मान पुरस्कार मिल्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला ।
कुम्भ – भ्रमण कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । नोकरी अथवा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन् । चुनौती र अपठ्यारा हटाउन आज गरिएको प्रयास सफल हुनेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । भोगविलासप्रति रुचि बढ्ला । प्रेममा सफलता मिल्नेछ ।
मीन – नयाँ जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ । आर्थिक पक्ष सबल छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने देखिन्छ । परिवारमा पाहुनाको चाप बढ्न सक्छ र तिनको आवागमनमा महत्वपूर्ण समयको नाश हुने सम्भावना छ ।